कसरी साझेदारी योग्य सामग्री बनाउने | Martech Zone
आइतवार, सेप्टेम्बर 6, 2015 आइतवार, सेप्टेम्बर 6, 2015 Douglas Karr
न्यू ह्वाइटपेपरमा न्यु योर्क टाइम्स ग्राहक इनसाइट समूहका अनुसार, साझा को मनोविज्ञान, त्यहाँ key मुख्य कारणहरू किन मानिसहरू अनलाइन साझेदारी गर्छन्:
मूल्य - अरूलाई मूल्यवान र शिक्षित सामग्री ल्याउन
पहिचान - अरूलाई आफैलाई परिभाषित गर्न
नेटवर्क - बढ्न र हाम्रो सम्बन्ध पोषण गर्न
संलग्नता - आत्म-पूर्ति, मूल्य र संसारमा संलग्नता
कारणहरू - कारणहरू वा ब्रान्डहरूको बारेमा शब्द फैलाउन
न्यू योर्क टाइम्स रिपोर्ट शानदार अनुसन्धान हो र मार्टेकमा हामी यहाँ गर्ने कामको लागि आफैलाई उधारो दिन्छ। जब हामी हाम्रो प्रकाशनलाई मोनेटाइज गर्छौं, साइट आफैं आत्मनिर्भर छैन (यद्यपि हामी त्यहाँ पुग्दै छौं)। Martech Zone हाम्रो एजेन्सी नेतृत्व प्रदान गर्दछ। मार्केटिंग टेक्नोलोजी, बिक्री टेक्नोलोजी र अनलाइन टेक्नोलोजी कम्पनीहरू आउँछन् उनीहरूको वेब उपस्थिति निर्माण गर्न र उनीहरूको बजार साझेदारी बढाउन। तिनीहरू त्यसो गर्छन् किनभने विश्वास र मूल्यको आधार को कारण हामी हाम्रो लेखहरू यहाँ प्रदान गर्दछौं।
हामी सामग्रीको बारेमा धेरै अनौंठो छौं जुन हामीले लेख्न र साझेदारी गर्न छनौट गर्छौं र यसको धेरै बनाउन काम गर्छौं साझेदारी योग्य सामग्री। हामी कसरी स्रोतहरू (न्यू योर्क टाइम्स खोजहरू जस्तै) क्युरेट गर्छौं, हाम्रो सामग्री लेख्छौं, र यसलाई साझा योग्य बनाउँदछौं?
प्लेटफर्म - हामीले लेख्न सुरु गर्नु भन्दा पहिले, हामीले यो सुनिश्चित गर्‍यौं कि हाम्रो साइटले साझेदारीलाई समर्थन गर्दछ। फिचर गरिएका छविहरू र रिच स्निपेटहरूले हाम्रो सामग्री सामाजिक साझेदारीको लागि अनुकूलित छ भनेर सुनिश्चित गर्दछ। यस फाउन्डेशन हराउनाले राम्रो सामग्री साझा गर्नबाट बर्बाद गर्न सक्दछ। कोही पनि गर्न चाहँदैनन् काम तपाइँको सामग्री साझा मा। सजिलो बनाउनुहोस्।
विवादास्पद विषयहरू - विवादास्पद डेटा, rans, र गलत गलत जानकारी रोक्ने औसत भन्दा माथि साझा गरीन्छ। ती विवादास्पद विषयहरूले हामीलाई प्राय: उद्योग नेताहरूसँग नमिल्दो व्यवहार गर्छन् तर साथीहरूको सम्भावना र ग्राहकहरूको सम्मान प्राप्त गर्दछन्।
रिच इमेजरी - एक छवि जोड्ने कसैको दिमागमा एक शानदार छवि पेन्ट गर्दछ। दृष्टान्तमा हेर्नुहोस् जुन हामीले यो पोष्टको लागि बनायौं। यसले स्पष्ट तस्वीर चित्रण गर्दछ कि जिज्ञासालाई ड्राइभ गर्छ र घटनामा गन्तव्य प्रदान गर्दछ यसले लिंक बिना त्यहाँ बाहिर बनाउँछ।
प्रभावशाली सामग्री - यदि गुगलले महत्वपूर्ण परिवर्तन घोषणा गर्‍यो जुन हाम्रा पाठकहरूलाई प्रभाव पार्न सक्छ, हामी हाम्रा पाठकहरूलाई घुमाउरो भन्दा अगाडि राख्नको लागि समाधान साझेदारी गर्दछौं। हामी ईन्डस्ट्री समाचार साझेदारी गर्दैनौं लगानीहरू, स्थिति परिवर्तनहरू, वा मर्जरहरू जसले हाम्रा पाठकहरूलाई असर गर्दैन।
मूल्यवान सामग्री - यदि सामग्रीले लगानीमा तपाईंको फिर्ती बढाउन सक्छ वा तपाईंको लागत घटाउन सक्छ, हामी त्यो समाधान वा उत्पादन साझा गर्न मन पराउँदछौं। यो साझा योग्य सामग्री हाम्रो प्रकाशन को लागी एक टन यात्रा गर्दछ।
खोज - हामी मार्केटिंग टेक्नोलोजी ब्लगमा हरेक हप्ता बिक्री र मार्केटि। सम्बन्धी टेक्नोलोजीहरूको सिंहावलोकन साझा गर्दछौं ताकि तपाईं सचेत हुन सक्नुहुनेछ कि त्यहाँ बाहिर समाधानहरू छन् जुन तपाईंको संगठनको समस्याहरूको लागि विशेष रूपमा निर्माण गरिएको हो। यी अनुप्रयोगहरूको खोजीले हामीलाई एजेन्सीहरू, मार्केटि and र बिक्री विभागहरूको लागि लोकप्रिय स्रोत बनायो।
शिक्षा - यो समाधान चिढाउन पर्याप्त छैन, हामी जहिले पनि कुनै पनि खोजहरू हाम्रा पाठकहरूलाई अधिक सफल हुनको लागि सल्लाहले लपेट्ने प्रयास गर्दछौं। सामग्री जसले तिनीहरूको जीवन सजिलो बनाउँदछ साझा गरिएको छ। महान सल्लाह जुन पैसा खर्च गर्दैन यी दिनहरू भेट्टाउन गाह्रो छ!
हाम्रो ट्यागलाइन छ अनुसन्धान, डिस्कभर, सिक्नुहोस् र ती लक्ष्यहरूले हाम्रो सामग्रीको साझेदारीलाई ड्राइभ गर्दछ। हाम्रो पहुँच प्रमोशनको लागि भुक्तान नगरी डबल-अ grow्कको बृद्धि गर्न जारी छ - एक राम्रो प्रभावशाली तथ्या .्क। हो, यी रणनीतिहरू सिक्न हामीलाई एक दशक लाग्यो। र पक्कै पनि - हामी तपाइँलाई तपाइँका पाठकहरूसँग साझा गर्छौं! हामी तपाई जस्तो सफल भएको चाहान्छौं।
हामीले देखाउनको लागि सिर्जना गरेको छवि साझेदारी गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् किन मानिसहरू अनलाइन साझेदारी गर्न प्रेरित छन्:
तपाईंको सामग्री बदबू आउँछ किनकि यसले यी तत्वहरूलाई हराइरहेको छ
अप्रिल 26, 2016 मा 1: 44 एएम
मैले यो पढ्न थालें धेरै हपिंग नगरी तर मैले सोचे भन्दा बढी पाएँ। यहाँ सरल र शक्तिशाली विचारहरू। धन्यवाद। मलाई आशा छ कि म यी मध्ये केही 🙂 पालना गर्न प्रबन्ध गर्छु